IScreenzy iphucula imifanekiso oyithathayo kunye nePC yakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IScreenzy ngumhleli okwi-intanethi wezikrini esivumela ukuba senze ezinye iitweaks ezinomdla zokwenza ezo zikrini zibe ngcono ngakumbi kunangaphambili.
Mhlawumbi eyona nto ilungileyo yile Ukulula kunye nemediatez ukuqala ukuphinda uthinte kwakhona umfanekiso weskrini okanye enye evela kwi-Unsplash, iwebhusayithi evulekileyo yokufota.
Siza kucofa ngokulula ngokungacwangciswanga ukuze kuvela umfanekiso ongacwangciswanga kwaye kufuneka siye ezantsi ukuze siqale ukuyibuyisela kwakhona. Kuya kwenzeka okufanayo ukuba silayisha umfanekiso weskrini weWindows kwaye siyishiye kunye ne-shading yayo kunye nezo zinto zichukumisayo.
Nje ukuba silayishwe siya kuba nenxalenye ephezulu yokufikelela kwi-typography yesihloko esibekwe kumfanekiso wokubanjwa kunye nothotho lwezinto onokukhetha kuzo tshintsha umbala, umbala wegradient, ukugcwala, ukukhanya okanye ububanzi okanye ukuphakama esifuna ukubakho kumda wokubamba.
Sikwanayo Amaqhosha ama-5 ukugcina useto olwahlukeneyo kwaye ke ngawo nawuphi na umzuzu sinokubuyela kwiwebhu ukuyokuzilayisha ngejiffy. Iziphumo zokugqibela zinokukhutshelwa kwiJPEG okanye kwi-PNG, kwaye iya kusivumela ukuba siyigqithisele komnye umsebenzi ngokubanjwa kwescreen okunemibala kunye nezo zikhethekileyo zokuchukumisa umbala.
IScreenzy yi service yahluke mpela kwinto esiyibonileyo ngaphambili kwaye yinto ekhethekileyo eyahlula kwabanye abahleli bemifanekiso esiyibonileyo igcwele le migca. Ukuba ubukhangela umhleli oza kwenza umsebenzi wokufota imifanekiso kwaye uyise ngqo kwiPowerpoint okanye umsebenzi ekufuneka uwunike, musa ukulibazisa ukuyeka ngekhonkco kwiScreenzy.
Siyacebisa lo mhleli wevidiyo okhululekileyo kwi-Intanethi kananjalo inezibonelelo ezithile njengekhathalogu enkulu yeefayile zemultimedia zokuthatha iividiyo ezikumgangatho ophezulu xa uhlelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ukuphucula izikrini kunye nomhleli wasimahla okwi-Intanethi obizwa ngokuba yiScreenzy